HD nge FTP com Filezilla Server e Windows 7 – Taylor Lopes ツ Blog
HD nge FTP com Filezilla Server e Windows 7
Ngenxa umdla Post “Yenza HD yakho ziyafumaneka kwi-intanethi nge FTP“, Ndenza inyathelo ngenyathelo ukuba imlungisele umncedisi FTP ukuba HD yakho compatilhar uze wenze kube lula nakweyiphi ikhompyutha udityanisiwe kwi Internet (YEPHELELEYO!).
Akukho Post cipande “Yenza HD yakho ziyafumaneka kwi-intanethi nge FTP“, sisebenzisa okanye CesarFTP + XP Windows ukuba kumiswe server yethu FTP. Nkqu sincoma ukufunda iqulathe imiba ethile ukuba akayi unamathele eli xesha.
Post Okulandelayo, sakhe server yethu FTP nge Umncedisi Filezilla + Windows 7. imifanekiso ezininzi (isikrini sokushicilela) ukuba kube lula ukuqonda ukuba ziphambuke ibe movie (ubaxo :D), banelungelo bakhuphisane ukuze Oscar kunye Avatar and Elite Squad 2. ke, ukuza ku!
download i Umncedisi Filezilla free ngqo ukusuka kwisiza umphuhlisi ngayo: http://filezilla-project.org/
Ukufakwa silula: Qhuba ifayile kwakho ukulandwa; yisa nje kuzo zonke amanyathelo, ngaphandle kokutshintsha into! Kuyo nayiphi na imeko, Baya ijikeleza ekhusini amancinci:
Umncedisi Filezilla – ukufakwa
Umncedisi Filezilla – ukufakwa | ilaphu yokugcina
kanye efakwe, Umncedisi Filezilla ziza kuqaliswa kwaye izakuvela ujongano yababini. ngenisa nje i igama umlawuli, njengoko kuboniswe ngezantsi:
Umncedisi Filezilla – ukufakwa | igama umlawuli
Siyavuyisana! Umncedisi wakho we FTP ngoku ilungele, elinde ukuxhumeka.
Umncedisi Filezilla – ukufakwa | ukusebenza…
Ukumisa esisiseko, kufuneka nje ukuba wenze utshintsho ezimbalwa. Oku kufuneka kwenziwe kwi menu Hlela> Useto. ngaphambi koko, I bacebisa ekudaleni uvimba weefayili (pasta) apho uya khona iifayile ekhoyo FTP. njengomzekelo, Mna ndadala weefayili D:\_FTP ezineefayili ezimbini ngaphakathi. ngamanye amazwi, yonke into kule directory koko ndizimisele ukwenza ekhoyo FTP ukusuka naphi na kwi planethi.
Ukuchazwa FTP ulawulo
Tshintsha izibuko apho umncedisi uya “lalela” of 21 for 2100. QAPHELA: Ingaba nayiphi na izibuko, kodwa khumbula ukuba eli zibuko iya kusetyenziselwa ukuvula i-firewall kunye umzila emva, kwakunye njengenxalenye idilesi ukufikelela umxholo ngu FTP. Izizathu zoku Mundaca I ndacacisa eposini yangaphambili, kodwa ishwankathela oko kungenxa abanye ababoneleli ADSL ukuvala i FTP port engagqibekanga (21):
Yongeza i umsebenzisi ukudibanisa / uqinisekiso, akukho icala, Mna ndinguNdikhoyo “admin”. Kwakhona ukongeza labobalawuli (pastas) ne fayile ofuna ukwabelana, enika imvume yabo yokungena (ukufunda, ebhalwe). Khumbula lwemibhalo D:\_FTP I wadala? Khangela kuye ebonisa phezulu apha:
Ngenisa uluhlu kumazibuko uqhagamshelo kwimo kwisixando. akukho icala, Ndasebenzisa zibuko olunye lokufumana ngoko ke uluhlu: 2101-2101. Nangona nezibuko FTP engagqibekanga ukuba 21 (safudukela 2100), kwakusazeka ukuba eli zibuko kuphela ukuba ulawulo yezithuthi; ukuze stream data, Oku ngokuphumelelayo kusetyenziswa emnyango 20 (safudukela 2101):
QAPHELA: Ukuba uceba ukwenza uxhulumaniso ezininzi ngaxeshanye (FTP), kucetyiswa ukuba ukwandisa eli zibuko uluhlu imo nje, thile 2101-2301. ecacileyo, kuza kufuneka ukuba la amazibuko, ngaphaya FTP (Filezilla), Kwakhona kwi kumzila firewall. A uqhagamshelwano nje, xa umxumi esenza isicelo transfer (FTP), iseva, ukuba ulindele (amatyala) uxhulumaniso, Kuba ngubani uxelela umxhasi kwi zibuko i data ziya baguqula. Wonke isicelo entsha, iseva kanga umxhasi usebenzisa izibuko ngenhla, kutheni kufuneka kwandiswe uluhlu uyezibuko data, ukuba uvumela uxhulumaniso ngaxeshanye. ngenye indlela, Inokwenzeka elinde iingxaki kuphele ixesha ngokuba nezibuko data 2101 ahluke, ukuze ukuba kukho yebhotile kuqhagamshelwano ezilandelelanayo, ekubeni nezibuko igcinelwe ngumthengi ngexesha elisebenzayo.
Ukukhupha firewall kunye umzila
ezolile, ezolile! Asinto ixesha ukuvavanya iseva yakho FTP. Eli nyathelo kubaluleke kakhulu! iingxaki ezininzi akakwazi ukwenza umsebenzi wakho FTP zinxulumene ekuvaleni yi firewall kunye / okanye umzila. ke, ndingatshiseki inyathelo, ukulandela inyathelo ngenyathelo unovuyo.
Yiya kwi menu Start> Control Panel> System kwaye Ukhuseleko> Windows Firewall yeWindows.
Cofa ikhonkco kwi ekhohlo “Vumela inkqubo okanye inkalo nge Firewall Windows”:
Cofa iqhosha “Vumela olunye uhlelo…”:
ufumane “Filezilla Server Interface”, sikhethe kwaye nqakraza iqhosha “ukwengeza”:
Qaphela ukuba “Filezilla Server Interface” sele ozakuvela kuluhlu lwe “Iinkqubo kunye nezibonelelo avunyelwe”. Legal!
ngoku, nkqu Firewall Windows, ucofe ikhonkco kwi ekhohlo “izilungiselelo”. Hlala ubukele, njengoko siza kukhupha iingcango 2100 e 2101 akukho firewall ukwenza Windows:
Cofa “Imithetho kwangaphakathi” kwaye ke “Rule entsha…”:
khetha “Protocol kunye Ports”, hlola le nto “Porta” uze ucofe iqhosha “phambili”:
Khetha le nto “amazibuko ethile” kunye uhlobo endle okubhaliweyo ecaleni emnyango 2100 e 2101, njengoseto kuchaziwe ngaphambili Filezilla. QAPHELA! Ukuba utshintshe iingcango kwenye, ngelo xesha, nceda, shintsha lapha kakhulu, kodwa, Ngeke isebenze. kwenziwe oku, nqakraza “phambili”:
lo mgaqo, o item “Uvumele unxibelelwano” It is sele bephawulwe. nqakraza nje “phambili”:
Nge zonke iinketho ezikhethiweyo, nqakraza “phambili”:
Nika igama kolawulo. I ebizwa “FTP”:
kungekudala! Uqwalaselo firewall sele kwenziwe! Bona mthetho “FTP” ukuba ukhupha umnyango 2100 e 2101 i-firewall sele owakhiwa “Imithetho kwangaphakathi” musa Firewall ukwenza Windows:
Ungaqwalasela kwakhona umzila wakho NATED (igxunyekwe ou wireless), ukuba, ukuze ndinikhululele ukutshintshwa yezithuthi lwangaphandle (Internet) umnyango 2100 (uqhagamshelo FTP yethu port) ukuba computer ebalekayo server yakho FTP. ukuze ufumane iinkcukacha, ukubona Post “Yenza HD yakho ziyafumaneka kwi-intanethi nge FTP“. Kodwa akukho mfihlakalo, ingcamango kukuxelela umzila wakho ukuba yonke into emnyango 2100, baqondiswe khompyutha yakho apho Filezilla, njengoko kuboniswa:
QAPHELA: Kwezinye iimeko, kusenokufuneka ukuphinda le nkqubo ukuba batshintshe izithuthi ngokusebenzisa umzila kwakhona umnyango 2101 (yethu port FTP data).
Ngaphezu, ukucebisa ukuyeka i SPI ukhetho (Stateful packet yokuhlola) firewall umzila, njengoko kwenzekayo lokungaphumeleli kwaye ngenxa yoko ivala ekungeneni. I-SPI technology lihlola yonke ingcaciso ayifumene iipakethi phambi ngokuvumela ukuba ukungena kwinethiwekhi.
Ekugqibeleni ke ukuvavanya server yethu FTP. Oku kunokwenziwa ngeendlela eziliqela, phakathi kwabo (1) browser Internet Hair, (2) yi Windows Explorer okanye (3) ngokusebenzisa i FTP client isicelo.
Ingxaki eqhelekileyo impazamo kwi Protocol ukwenza umnxeba. Le protocol elungile “ftp://”, Kungenjalo uzakufumana uhlobo imposiso “500 impazamo yokuma kwezivakalsi, umyalelo engaziwa” (oku kungenzeki kum, hahaha):
Masenze uvavanyo ekuqaleni ukwenza ufikelelo lendawo. kuba lo, vula ibrawuza yakho uchwetheza kwi bar yedilesi: ftp://127.0.0.1:2100. Jonga ukuba sisebenzisa port 2100 IP ukuya ekupheleni! Kungekudala kuza ibhokisi igama elithile, icela uqinisekiso. Sebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo olisetileyo lomsebenzisi setting uqwalaselo lwe Filezilla:
Ukuba konke kuhambe kakuhle, iya kubonisa imixholo “FTP” kanjani na Filezilla, enengqondo, ngokuhlonipha umsebenzisi efanelekileyo imvume. Qaphela ukuba umxholo kwadingeka ngaphakathi D:\_FTP on HD yam ifumaneka apha:
Kukwanjalo Kwenzeka kwi Windows Explorer. Vula uze ufake ftp://admin@127.0.0.1:2100. Qaphela ukuba wasebenzisa umsebenzisi “admin” ne IP, ngenxa yokuba kwezinye iimeko, Ezinokukubangela ukuba ukwaziswa:
Ke kaloku, ukuba sisebenze endaweni (127.0.0.1), esisebenza ngaphandle, ukuze nge IP Internet esebenzayo anganako ukufikelela iseva FTP nakweyiphi ikhompyutha idityanisiwe Internet. Ukuze ufumane IP bakho bokwenene, It has iintlobo ezininzi. I wasebenzisa site http://meuip.info/, nabanye abambalwa:
lula, ezithile? Thatha le IP ukuba wabonakala khona kwaye usebenzise endaweni ye IP endawo 127.0.0.1 (REPLACE). Khumbula ukuba umthetho olandelwayo i FTP:// ilandelwa yi IP, ikholoni (:) kwaye i FTP port (2100). Nto inokwenzeka ukuthatha imizuzwana embalwa de login ibhokisi yencoko yababini.
Le khontenti zixhonyiwe browser Internet ngempumelelo!
In Windows Explorer nayo yenza ngokumpuluswa. Faka into efana ftp://admin@189.75.34.242:2100.
Nje ngezantsi sibona ukuba isiqulatho HD (D:\_FTP) kubonakala 100%. kuhle, ndiwugqibile lo Post, Ndinga ke ndinganikhumbuza umgaqo ayikho ukusebenzisa IP esebenzayo, ngokuba itshintsha rhoqo. ke, njengoko kuchazwe kule post yangaphambili, ukuya le ngxaki ngokuthi sizithathele i DynDNS okanye No-IP. Yinto free!
Ngoko lo. luck impumelelo Good kunye!
Lonke Ufumaniso: 158688
9 uOktobha 2010 Taylor Lopes	iseva filezilla. filezilla, ftp, hd, windows 7, windows ezisixhenxe
118 ncomo “HD nge FTP com Filezilla Server e Windows 7”
Pingback: Yenza HD yakho ziyafumaneka kwi-intanethi nge FTP « Taylor Lopes :: blog Personal :: iikhompyutha
Kulungile, post otimo kwachazwa kakuhle kakhulu, kunjalo, yonke besebenzele mna, kude kufike ixesha lokuba ukubeka IP ngaphandle (189…) ne IP yangaphakathi
umatshini yam isebenza kakuhle, kodwa xa ubeke ip akukho modem funfa ekhumbula ukuthi esele wanika imvume yokufikelela
umzila root. umzila wam lo 2640T DSL kwaye musa ukuba i-SPI ukhetho kukuba sele wazama phantse yonke into hayi kunye nokufikelela ngaphandle… apho kuya kubakho ingxaki???????????????
18 uJanuwari 2011 ukuze 0:05
Mhlawumbi akuyi umzila kabini? Kuba ezinye iimodem ADSL nabakwasebenza imizila, kufuneka kukho Ungaqwalasela NATED zombini… ukubona iinkcukacha kule impendulo Ndaniseza ngezantsi, okanye uthathe wokufundwayo kwenye post ophendula: http://taylorlopes.com/?p=1021. Le veki umhlobo akakwazanga ukufikelela kuyo ngaphandle (Internet) ngaphakathi (LAN), I saba modem of GVT nalapho kumzila. khona, ngokwanele ungaqwalasela Server modem Virtual, obubonisa engenazintambo, kunye Rodeador wireless esalatha umatshini kunye Umncedisi Filezilla, waza wahlabela mgama ukusebenza. Kwinkcukacha ebalulekileyo, Andimazi isizathu, alguns fashion (okanye GVT umqhubi) musa ukuvumela loopback, ngamanye amazwi, ukufikelela idilesi yangaphandle, xa ngaphakathi kumnatha womsebenzi wobulali. umzekelo: ukufikelela ikhompyutha kumsebenzi womnatha wakho DynDNS URL yakho, into efana http://meuftp.dyndns.org:2100. kulo mzekelo, xa ngaphakathi (LAN), ukufikelela LAN IP okanye lenginginya apho umncedisi FTP kwaye, xa ungekho (ethile, ngaphandle kwenethiwekhi yakho), hamba kwidomeyini yakho DynDNS okanye esebenzayo Internet IP. Falouuu…
19 uJanuwari 2011 ukuze 20:11
Paul B. Boldrini wathi:
Mna ndaba 3 ezama ukuba imlungisele iseva FTP Private.
Ngokomthetho ukususa iifayile i HD yangaphandle (uhlobene notebook) ngokuba okanye Android, zombini womnatha (WiFi) njengoko yoqhagamshelo lwangaphandle (intanethi ehambayo, enye inethiwekhi WiFi).
Yintoni wabonisa ngokwenene esebenza, I umnikazi UOL modem (SpeedTouch 510) no Netgear umzila (MR814 v2) kwaye khupha amazibuko kumacala omabini imodem kunye umzila, Kwaba ngokubeka kumncedisi (netbook) kwaye ngaloo ndlela ke ukufikelela lwangaphandle yangaphakathi xa ingasebenzi, kodwa landela icebiso lakho, wammisa ukuba izibuko modem ukuya umzila uze usete kumncedisi (netbook)…. esebenza ngayo.
Tutorials ezahlukahlukeneyo kwi web, eh kakhulu yayo eneenkcukacha.
(Ndiya asayine Feed Site)
27 uJanuwari 2013 ukuze 1:50
Jonga andinako ukwenza. ngqo ukulandela izifundo kwaye isikhangeli usebenzisa inethiwekhi yam yangaphakathi wanika imposiso, Andikwazi kunikezelo nje lo mhloli. Kwaye ke Internet ngaphandle kwenethiwekhi musa ukungena nantoni na (ngumkhangeli zincwadi okanye wamazwe ubona yaye sinika umyalezo esithi, andikhange ukuba). I khulula emnyango, sele lakhupha firewall zombini iiwindow njengoko kwinethiwekhi yam, Ndayikhomba kumatshini yam lifakwe uqwalasele server. Yeah kube nzima kakhulu. Ngaba ubani kundinceda?
20 uMeyi 2013 ukuze 19:40
Bekuya kuba mnandi kuwe iinkcukacha ngcono ingxaki; bathi leyo unika imposiso, uhlobo isebenzisa uqhagamshelwano intanethi (radio, gvt, …). Qaphela ukuba Filezilla has a Log. ngaphandle kwale, kunzima ukunceda, ngokuba ndenze le ufakelo koomatshini ezininzi kwaye isebenza, ngokuqinisekile. wathetha!
20 uMeyi 2013 ukuze 20:00
nokuthi xa kuvavanywa umnyango 2100 ngokusebenzisa isayithi http://www.t1shopper.com wabonakala lo myalezo:
-187.11.104.198 uyaziphendula kwi zibuko 2100 (amiganetfs).
into Ndiyakholwa ukuba kulungile ukulungisa uqhagamshelwano?
18 uJanuwari 2011 ukuze 0:20
oi, oku kuthetha ukuba umnyango luvuleleke ngayo kweyakho imodem / umzila, kodwa kufuneka uqinisekise ukuba “iseva virtual” (NATED) Wena ayalwa ukuba IP yakho yekhompyutha apho Umncedisi Filezilla ifakiwe. Ndibabonile abanye abantu iingxaki xa zivela ngaphandle (Internet) ngaphakathi (LAN), kuba ngaphandle kokwazi indlela kabini… Kubalulekile ukuba ezinye iimodem nazo imizila, khona, kule meko, Kufuneka ulungiselele NATED, ngamanye amazwi, ukwenza ADSL modem (kuwo nakho kumzila) kwaye umzila (ngokuqhelekileyo wireless). enye inketho, Kubalulekile ukuba uqwalasele i modem ADSL ukusebenza kwimo ibhulorho (Ponte), ebangela Kwathi ukuhamba ekunene ngokusebenzisa imo ADSL ndiye engenazintambo, ukuba nkqu lowo kufuneka achithe ukwenza ububhali uHlelo kunye nomsebenzisi. wathetha, t +
19 uJanuwari 2011 ukuze 19:59
Bulelani Taylor, Ndaba ingxaki wombane nje, ithemba ngokumanga singakwazi ukwabelana ngezimvo ezininzi, sibonga
22 uFebruwari 2011 ukuze 20:38
ola Taylor, tuto elihle. Kodwa mna ndiza zikhululwa, qdo ukufikelela ngaphandle q umyalezo Awunayo imvume kwe ncwadi eneenkcukacha. Q being'm uzama ukwabelana i q eneenkcukacha sele sebenzisa kwi windows. Ja wazama q uyazi ukukhululwa lweefowulda, Kwi-micro qlqr ngaphantsi FTP. Yebo into eshiywe ukwenza!! It has uncedo?
7 uMatshi 2011 ukuze 11:52
oi, kuqala kufuneka ukuba uvavanyo endaweni, ngamanye amazwi, ukwenza izilungiselelo Article, vula ibrawuza yakho chwetheza: ftp://127.0.0.1:2100 okanye ftp://localhost:2100, kodwa ke, Ndasebenzisa umnyango 2100, utshintsho kuyo xa kuyimfuneko. Akukho mfuneko ukwabelana eneenkcukacha ngu Windows! ukunika nje imvume yokuba i FTP siqu. Enye into ebalulekileyo kukuba ukukhulula Firewall ZOMBINI amazibuko esetyenziswa yi FTP. Ndasebenzisa umnyango 2100 (ukuze bahambe imiyalelo) yaye 2101 (ukuze stream data). Ukuba ngaba ukukhulula Firewall, Ngeke isebenze. Zama kwakhona, inyathelo ngenyathelo, kanye njengoko kuchaziwe kwiSiqendu. Ngoko emva kokuba wenze utshintsho lwakho. kuhle, ukusebenza apha, ke kufanele uhamb, ngamanye amazwi, i Internet. kulo mzekelo, ukulandela le Inqaku amacebiso, ukufunda izimvo zabanye oogxa, ukuba yonke into aya kusebenza kuzo, Kulungile? umbulelo!
8 uMatshi 2011 ukuze 9:33
Mna ndayizama kule 50x na le ngxaki, Ayizi ukubaleka ezifana nehum. Ndicinga ukuba iqha- ADSL NET yam yabo. drip certinho, Ndisebenzisa no-ip kodwa ngqo. Nkqu enkosi tuto. ndibulela kakhulu. wathetha
16 uMatshi 2011 ukuze 17:27
Zama ukuba kungasebenzi wesi firewall nje ukuba ubone ukuba usombulula… khumbula ukuba kufuneka ukukhulula mazibuko mabini FTP: 20 e 21 (okanye lowo u ndimmisele FileZilla, njengoko 2100 okanye 2101). Enye iinkcukacha kukuba FileZilla unalo LOG apho u nga khangela ingxaki enokwenzeka ebhalwe.
31 uMatshi 2011 ukuze 17:02
donsa, bayifumana, kuphela ukhethe ukhetho Sebenzisa oku kulandelayo IP setings mode UMSI. ngoku hamba!! wola!
16 uMatshi 2011 ukuze 17:43
Enkosi ukwabelana isisombululo kwingxaki nazo! ngokuqinisekileyo bakhonze thixo, Falouuu…
16 uMatshi 2011 ukuze 18:51
Ndifundise nazo umzila yam Zinwell ZPlus G880!
kwingingqi Access nge IP endiwabekayo ndazibamba ikhadi womnatha yam, kuquka ukufikelela nge wirelass nayo, Sao ahlolwe Ayinakunikezela ngaphandle kwenethiwekhi yam yeenkqubo ezicatshuliweyo.
Into awayeyifuna ufikelelo nge iinginginya wenza ukuba akukho-IP are 2 kodwa xa uyichwetheza kukho naso ftp://name.hosts:8221 ngelakamva sisizibuko iqwalaselwe kwi filezilla server njengoko kubonisiwe.
11 June 2011 ukuze 19:46
u ukubeka into endle kuba ubuza ip
24 June 2013 ukuze 14:09
Taylor, enkosi negqwetha yaba intle ndiyifumene phezu umnatha, kakhulu kwimeko yam yona awunakusebenza ngaphandle; ke idla isebenza kwi inginginya yobulali kwi Internet nantoni, wenza into Melial wathi yangcono noko wabuza igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha akangenanga ngaphezulu. ityala yam kulandelayo I internet intambo akhutshwayo yi-mac ikhadi yenethiwekhi, Kwakhona sebenzisa i zendlela wireles kunye intambo cofiguraro WAN kwaye usebenzise yi uphawu ezingenazingcingo bam desktop yam kwaye umzila I akhululwe iingcango kunye spinnaker yayisele abakhubazekileyo.
I thatha omninzi umsebenzi oku Ndiyabulela kuwe.
30 uMatshi 2011 ukuze 13:27
Njengokuba waxelela amanye phezulu, zama ukukhubaza wesi firewall nje ukuba ubone ukuba usombulula ... khumbula ukuba kufuneka ukukhulula mazibuko mabini FTP: 20 e 21 (okanye lowo u ndimmisele FileZilla, njengoko 2100 okanye 2101). Enye iinkcukacha kukuba FileZilla unalo LOG apho u nga khangela ingxaki enokwenzeka ebhalwe.
31 uMatshi 2011 ukuze 17:03
Andazi apho angekhoyo kodwa Inyaniso kukuba elidlulileyo embalwa kwimizuzu server filezilla owenza uxhulumaniso liphelelwa, zamadoda ufikelelo namkhanyela ngaphandle kwenethiwekhi yam.
Mna wesi Panda Global Protection kwaye umzila yam GTS Telecom AP Super Power, Ndalandela yonke le ncwadi tuto ngayo umhlobo wethu yaye akukho mpumelelo kude!
Okungcono uyazibuza ukuba umntu angandinceda uqwalaselo yenziwe ukugcina yam wirelass antiviris nerediyo ekhankanywe ngasentla ngenxa ukuba silandela indlela njengoko kuchaziwe kule blog ndiza hit inene, njengoko amanyathelo owalandelayo kulula kakhulu kodwa, engumshumayeli njengokuba mna Inyaniso kukuba kusekho ukhetha ukuba nihlale okhuselwe nge unqulo kwam, kodwa mna ndaxakwa ngokuba nako ukufikelela FTP yam ngaphandle.
20 Epreli 2011 ukuze 4:00
Isiphakamiso ukucima unqulo nje ukubona ukuba lo nguye lowo uvimba uqhagamshelo FTP. ukuba, ke kufuneka ukhangele kuyo ethile setting ukuba ukhupha isicelo FTP okanye zibuko, kodwa ukuba ukwenza njani oku ziyahluka unqulo ngalinye. ke, Oku akuthethi ukuba ngaphandle antivirus, kubalulekile nje ukufumana unobangela wengxaki!
Ukuba usebenzisa radio Internet, ke ukuba asebenze ngaphandle inokuba yingxaki esiye saxoxa. sicela, thatha ujongo:
Inyaniso kukuba kufuneka FTP umsebenzi umthunywa zabucala ekuhlaleni kuqala. Ke yes ilungiselelwe ukuba isebenze kwi Internet. Oku kunceda ukuchonga iingxaki ngezigaba. Ah, a asebenza siyiposele kuwe ngaye ukusebenza, Kwafuneka ukusebenzisa ukhetho lwe Filezilla Sebenzisa IP Ukulandela ekuqingqeni mode UMSI. zama apha…
Mandithathe eli thuba lokuba ukuvumela abanye oogxa ukuba uphendule le mibuzo neminye kuwe, ukuba yayenzeke nge e-mail:
Ngokuqhelekileyo lo NATED kwenziwa nge ekuthiwa imithombo “iseva virtual” e “Port Ukudlulisela”, oko akukho ngaphezu ukudlulisela umlambo ngegalelo idatha micro sagqitywa ngokusekelwe kwi-IP yakho and Port. Kuqala uqhagamshelo FTP wengingqi kufuneka funcinando 127.0.0.0, njengoko ukuthethileyo kulungile. Ngoko kubonakala ukuba ayikho kuphela ukucwangcisa i NATED. Masithi wenze isicelo FTP ezayo evela kwi Internet (umzekelo, usebenzisa IP livela http://meuip.info). Kubonakala ukuba esi sicelo uya kuza umzila wakho, ukuba lowo ubambe IP enjalo ebonakala http://meuip.info. kuhle, nangasemva, umzila wakho kufuneka achaze ukuba ukuthumela le sicelo. ngayo (umzila) kufuneke ukuba xa ufumana isicelo (inkonzo) emnyango 21 (okanye 2100, okanye lowo licacise), Kufuneka uthumele ukuhamba kumatshini efakwe filezilla (iseva FTP). Ukungaphumeleli ukwenza njalo, ayisebenzi!
Le updater no-IP okanye dyndns a software ukuba kufuneka ufake kulo matshini apho filezilla okanye sebenzisa DDNS ukhetho lwe umzila wakho, inkxaso icala. Le updater ivela amaxesha ngamaxesha ukubona ukuba IP unobushushu (IP Internet, elinye livela http://meuip.info) na Kuye itshintshile.
Makhe angazenza domain yakho ftp://gilmar.dyndns.org:2100. Xa uchwetheza ibe browser yakho bha yedilesi, Iqala isicelo ukuya domain umbuzo, bezibuza ngubani dyndns.org. Fika kwi dyndns, Uza ukubuza, leyo esemthethweni IP gilmar. IP ubunini esebenzayo, egcinwe yi updater yakho, ngoko requisão sibhekiswe izixhobo ukuba nale IP. nge wathi, othe wafumana le IP wakho ekhaya (ngaphandle kokuba q VC ukuqhagamshela kwiPC yakho ngqo kwi Internet, khona apho kuya kubakho micro bakhe babeza kuba IP). Ukufika phezu umzila, uya kucela, endikuthuma esi sicelo efika kwi zibuko 2100? Le NATED apho yakho, ngokuba nguye lowo uya kudibanisa izibuko inkonzo FTP (apho ityala lakho 2100) nesibakala sokuba umatshini unalo ibaleka iseva FTP. ecacileyo, lo matshini kuya kufuneka ukuba ube IP ZIMILISELWE, ezinye uhlobo 192.168.0.10. Khangela kwi-intanethi njengokuba iseti esisigxina IP, akukho mfihlakalo.
22 Epreli 2011 ukuze 9:10
Ndafunda ukuba ukubuyekeza apha: Sebenzisa ezi zilandelayo IP em setings imo UMSI!
Ngaba oku ukusombulula zonke phezulu kum ukufikelela ngaphandle?
23 Epreli 2011 ukuze 18:52
Andazi ukuba, zama ukubona. Kwimeko yam, azifuneki…
23 Epreli 2011 ukuze 20:06
dofabricante wafumana umzila yam GTSTelecom:
IP ukulungisa uthungelwano domestic yeNkosi ngoko hamba Izicwangciso Ezibhekisa phambili / LAN,
kwaye licudisa ku DHCP LUNGISA, Yenza i Mac ukubeka zabathengi Mac and IP IP ukuba kufanele ukufumana, kwaye ucinezele Faka, le nkqubo kufuneka zenziwe ukuze umxhasi ngamnye kumsebenzi womnatha.
Ngaba oku sisisombululo ukungena kunye data uphume kunye ftp wam zinokufumaneka ngaphandle?
23 Epreli 2011 ukuze 19:23
Enyanisweni kufuneka nje ukushiya ikhompyutha IP esisigxina leyo isebenza Filezilla. Oku kunokwenziwa ngqo kwi computer (kucetyiswa) okanye umzila, njengoko kuboniswa Support kumzila. kulo mzekelo, xa ikhompyutha yakho iqhagamshelana kumzila, sibona i Mac kwaye unika IP efanayo ukuba ubeke.
Oku akukho sisombululo, Le yinxalenye yesisombululo. Ndicinga ukuba akazange ncam ukuqonda Dynamics ukuba Nat indlela. Kodwa kakuhle, ukuba kungekudala yonke into isonjululwe…
23 Epreli 2011 ukuze 20:05
Ndafumana le mpendulo kodwa andazi apho ukuya ngoku kuba andazi ukuba mandenze ntoni ukuze IP kunye yam IP fixed kwi womnatha yam yendawo 192.168.1.4
ichweba ukuskena 200.171.76.8
200.171.76.8 Yena ayiphenduli kwi zibuko 2100 (amiganetfs).
23 Epreli 2011 ukuze 19:52
Ukuba akunazintlobano ekuphenduleni umnyango 2100 Kungenxa umzila wakho asilungiselelwanga (NATED).
Zendlela kufuneka ukufumana Internet esebenzayo IP! Khangela oku PHANTSI kwi page kumzila Uqwalaselo, ukuba abone ukuba yintoni na elaa IP lwangaphandle (Kufuneka zibe). Ukuba umzila wakho akafumani IP esebenzayo, Le nto mhlawumbi Internet yakho nge Radio (IP yakho esebenzayo kwabelwana ngumniki: Kuza kubakho olukhohlisayo!!!) okanye imodem yakho ADSL nako umzila, ngamanye amazwi, uziphakamisa idilesi ye-IP, yaye ethumela IP abandayo umzila wakho (qaphela ukuba nje 2 vane), apho kungekho elilujongano yenethiwekhi Internet.
Ukuba ukubeka ngokupheleleyo ngalo mba, I bacebisa ukuba uthatha efuna google malunga NATED, Lungile IP, Networks okanye ndingabizi ezintanjeni ukuba ukunceda, ukuba akunjalo , Kungaba ukukhathazeka.
23 Epreli 2011 ukuze 20:16
Njani malunga nemizuzu TC embalwa kwi MSN kwaye yonke into apho TC undiphathise kubasebenzisi ezinye duvidos abafana nam ukuba okunokukunceda ukuzisombulula ezifanayo iingxaki endinokuhlangana nazo, I bakuthumele 3 zenja of GTS wam Super Power AP kunye yam DSLink 200E ngamasimi mna compicado COO Nat, IP endawo?
Inene, le zendlela ADSL modem ukuba kufuneka umenzi kunye domelo na 200e DSLink sele wirelass umzila yam GTS Super Power AP.
I nje udale i-No-IP faustino.zapto.org sifakelwe inkqubo apha kumatshini apho umncedisi FileZilla kodwa got ukufikelela kule domain, kodwa kuphela IP I kumisela owam 192.168.1.200 kwaye nocango 2100.
Kufuneka ubeke i domain simahla okanye FileZilla into?
23 Epreli 2011 ukuze 20:58
Fixei IP 192.168.1.41 i GTS Super Power AP abqwalaselwe UDP TCP nale IP amazibuko ngaphezulu 2100 e 2101 i domain No-IP faustino.zapto.org kodwa ngelishwa kunjalo awukwazi ukufikelela kule ndawo kodwa IP ukuba ibanike fixed mina kuphela lendawo.
Yintoni ndashiyeka ukwenza?
Ndiya kubulela Andazi nto, I nga hlawula ukuba ungandinceda ukuba!
26 Epreli 2011 ukuze 2:48
hi Gilmar, ngokwenene ube ngenxa ze banikezele… guys computer elungileyo ndiyazi usoloko le ukuzimisela… wokuqala kuyo yonke, I Akabhatalelwa nantoni na ukunceda, kuphela ukuba bangaweleli kumgxobhozo oluxhasa kuba luhlobo into isiza uyakhawuleza uku bana phandle ingxaki, kodwa kude kube nzima kakhulu kwaye kuthatha ixesha…
ke, comrade, ngoko ke Sicebise ngeminye jonga zobugcisa apho kufutshane nalapho uhlala khona… kuhle, Ndiya ukuphinda ezinye izinto, akhanyise…
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ke uyazi eyona ngxaki, le, ukwenza:
(1) O FTP iqhutywa apha (127.0.0.1); Ukuba ayisebenzi kwi site, Akusayi kusebenza kude. Ukwenza le site uvavanyo, vula ibrawuza yakho uze ubhale into efana ftp://127.0.0.1:2100.
(2) Bona ukuba umzila yakho ifumana esebenzayo IP Internet (Ukuba intanethi yakho abo baboneleli irediyo, kungoko nzima, ngokuba kube esebenzayo IP hayi wena, kodwa kwabelwana kunye nabanye abathengi). faka nje uqwalaselo page umzila, ngokuqhelekileyo Status tab, uya uyazi ukuba i IP esebenzayo. Le IP elivela kwi zendlela kufuneka ibe IP enye evela xa ungena kwisayithi http://meuip.info/ (Le IP zibambekayo);
(3) Ukuba unayo i modem ADSL, qiniseka imodem ngubani kukufumana IP esebenzayo. Ngokufanayo, ufake nje uqwalaselo page modem, ngokuqhelekileyo Status tab, uya uyazi ukuba i IP esebenzayo;
OBS: Ukuze ukwazi ukuba esebenzayo IP? Phendula: Yile IP eya okuvumela ukuba uxhulumane evela ngaphandle (internet) ngaphakathi. Ukuba awuyifumani IP sisebenza kwi zendlela okanye ADSL modem, ngubani na ukuba ikunike Internet usebenzisa IP ekwabelwana ngayo kunye nezinye iinkonzo, khona, Ngeke isebenze!
(4) Isilumkiso ukuba kufuneka ube kukuba xa imodem yakho ADSL abo bafumana IP esebenzayo, ke kufuneka ufake setup ngayo alishiye kwimo ibhulorho (Ponte), njalo, yonke ukuhamba data ukuze, Uya mayibhekiswe umzila wakho, ukuba ngubani oza ukuziphindezela IP esebenzayo. kulo mzekelo, kuza kufuneka ukuba uqinisekise ADSL yakho umzila, kungabi modem ADSL (kuba oko kuya kuqhubela kuphela). Xa DLink umzila yam uqwalasele udibaniso eyayiza kuba modem kwi Cwangcisa> Internet> Connection Internet Khetha Manual> Uhlobo Connection Internet> Connection Internet yam : uHlelo (Igama lokusebenzisa nephasiwedi).
(5) Ekugcineni, Kufuneka ukuba Nat ngokuchanekileyo, zokuqwalasela umzila wakho ukuba ulalele kwizibuko 2100 (nokuba FTP yakho) phambili ukuhamba umzila kumatshini wakho apho Filezilla.
Yiloo nto…. wathetha!
12 June 2011 ukuze 10:41
khangela I apha kwakhona…Mna zokunyanzelisa kufuneka ukuba, abanye isizathu sokuba akazange…?
Kuza kuba nzima kodwa ukwazi ukuba yiloo nto yokugqibela ufike apha.
I lukhubazekile wesi Panda Global Protection 2011 firewall yakho yaye waqhubeka ewuthabatha umnqwazi wam phezu FTP!
GTS kumzila yam ndafumana parameters kodwa ukunika…
they are: Izicwangciso DynDNS icela igama domain, Igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha
I okulandelayo Watchdog icela idilesi ye IP-Inginginya
Ngaba kundinceda kule uphendlo esitsha isisombululo kwi ftp wam angasebenzi Panda wesi yam yaba nto?
26 Epreli 2011 ukuze 5:07
Inye kuphela nangoku endingayiqondiyo kukuba kufuneka 2 bemikhosi No-IP ucinga ukuba kufuneka…
ntoni Good ndandingakwazi ukufikelela iseva yam FTP kwenye indawo
Endiwumisileyo umncedisi lwefayile kunye namazibuko 8221 8222 TCP / UDP Ndakulusikelela IP yam womnatha yam yaya phezu umzila kwaye wenza yonke into kanye njengokuba inyanzelekile kodwa Inyaniso kukuba ndingakwazi ukufikelela iseva yam ftp filezilla kwi host sam akukho-IP, kodwa kuphela IP endiwabekayo ngokwam apha uNic, Andizange ukuqonda nto!!!
Ndicinga miss encinane ndifumane imali eninzi…Ngu lobusi kundinceda!!!
11 June 2011 ukuze 19:39
I domain No-IP okanye DynDNS ayonto ibalulekileyo. Le domain kuya kuba luncedo kuphela emva kokuba ukufikelela FTP yakho ye IP esebenzayo esebenza. Le ithambeka No-IP kunye DynDNS abonisa kuphela IP yakho esebenzayo rhoqo utshintsha, kungeso sizathu igama (demesne) kube mnandi, ekubeni ayenzi ukutshintsha. FTP wakho uya kusebenza ngokuqhelekileyo ngaphandle No-IP okanye DynDNS, ngaphandle kokuba uyayazi into esebenzayo IP okwangoku yi umatshini wakho ukusetyenziswa (okanye umzila). umzekelo, abazidlayo ip yakho esebenzayo 189.75.34.242, ngoko ukungena FTP yakho ftp://seuUsuario@189.75.34.242:2100, Kuya kufuneka ukuba sisebenze ngokwesiqhelo. IP yakho esebenzayo kungabonwa kule sayithi: http://meuip.info/.
Kubonakala ukuba ingxaki yakho kwi umba esebenzayo IP. Ndicinga ukuba babengayiqondi umahluko IP esebenzayo nengqele IP. Ukuchaza grotesquely, i IP esebenzayo ke IP onokulufumana iminxeba (DSL, ukucofa Up, etc). Ke naye ukuba azuze ukufikelela kwi-Internet yaye obalulwe ngendlela eyodwa kwi web wonke. IP kakade kubanda, i IP umatshini wakho ingena womnatha wakho, It 'yesitshixo sele inikezelwe yi umzila (DHCP). kubanda ayisebenzi kwi IP Internet, kuphela womnatha wakho! Ukuba ufuna ukufunda okungakumbi ngalo, izakwenza uphendlo, kuba kwi-intanethi uya kufumana zibe IP abandayo. Apho uya kubona ukuba njenge IP 192.168.0.1 (imaski 255.255.255.0) Kuyabanda kwaye, kucace, ukuba umzila yakho kukufumana IP ebandayo, abazange uza kukwazi ukunxibelelana Internet.
ke, kufuneka siqale sibone ukuba umzila wakho kukufumana IP esebenzayo. faka nje uqwalaselo page umzila, ngokuqhelekileyo Status tab, uya uyazi ukuba i IP esebenzayo. Le IP elivela kwi zendlela kufuneka ibe IP enye evela xa ungena kwisayithi http://meuip.info/ (Le IP zibambekayo). Ukuba PS azifani, Ngeke isebenze. Emva koko ke kufuneka ubone ukuba nabani ikunikeza Internet, zikuko forncendo ube IP esebenzayo. Kuyinto eqhelekileyo kwezi internets radio zisebenzisa IP esebenzayo, kwaye anike i IP ebandayo (lascou!). Enye into ivelisa olu hlobo ingxaki ukuba umzila kabini, has zendlela ADSL modem nosele, ngamanye amazwi, umqondiso ADSL intanethi uza modem / umzila uze esiya umzila (engenazingcingo okanye hayi). kulo mzekelo, Mna ndicebisa ukuba uqwalasele modem yakho / umzila (leyo kuqala esifumana i SIGILL Internet) ukusebenza kwimo ibhulorho (Ponte), Ngale ndlela nokuphuma nolunyanisekileyo IP Internet liya bonke kumzila esingenangcingo, apho kulapho wena kufuneka uqwalasele uqinisekiso kunye nomboneleli wakho (BRTurbo, oi, UOL, etc).
12 June 2011 ukuze 11:14
Namhlanje Ndabona IP yam zisebenza okwethuba elithile le 189.18.19.252 ukuba ndiyakuqonda IP esivakalayo into ISP unipha mna ilungelo?
Ndakulusikelela IP yam apha 192.168.2.200.
Yokuphuthuma kwam u ndikhokelwe ftp://gilzinho.zapto.org@189.18.19.252:2100 kwaye kwakungelula, kodwa ftp://gilzinho.zapto.org@192.168.2.200:2100 Kulapha ke nje zangaphandle.
Ndenze uvavanyo apha Simple Port Ukudlulisela ayiphumelelanga zombini neengcango 2100 njengoko 2101 Ndayibeka zilla ifayile
Ngoku u wathetha umzila DSL Modem apha modem yam DSL 500B link isizukulwana esitsha!
Ingaba kufuneka ukukhulula iprotocol kuye, kuya kuba unobangela ukungaphumeleli yam?
Yintoni le migaqo kuya kuba xa DSL wam 500B imbangela enkulu?
13 June 2011 ukuze 5:31
Olonwabo ntoni xa thina sishiye zonke iibhokisi waphawulwa ixesha ekhethiweyo incwadi eneenkcukacha ukuba siya kuba nesabelo Umncedisi FileZilla?
Indlela yokuthintela iifayile ukuba, umz hayi ukuhlela okanye ingabandakanywa ngengozi?
11 June 2011 ukuze 19:55
Ndingene DSL modem yam 500 B entsha DLink kodwa wafumana Nat nangona ukuba mna andiyi ukusebenzisa modem yam ukukhangela kodwa umzila ngoko wirelass ukukholwa nguye kwimo Bridge abese necessáro Mecher kuyo kodwa firewall kwi computer zam wongeze mna iminyango 2100 e 2101 FileZilla for FTP kunye makaqonde wadala 5 amazibuko nenjongo efanayo 2100 e 2101, Ndiza crazy nge kwimiqobo kakhulu kodwa ke kufuneka ukuba oko kuba wonke umntu akakwazi ke asikwazi bar me…lelo chiza!!!
13 June 2011 ukuze 5:47
Ngoko i ubukhe net nge radio and ngumxhasi wam kunomathotholo ta ip njengoko eguquguqukayo ndabeka q ip ukumnika ukufikelela ngakumbi IP hayi intanethi.
Kuza kudlula umncedisi nge zam umniki-radio?
into endiyenzayo ukuze sikwazi ukubeka FTP lam online?
plixx othile kundinceda
24 June 2011 ukuze 23:21
Molweni guys indlela bonke?
Ndinibhalela oku ukucela ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
Ndikwazi kumisa umncedisi yam filezilla ngempumelelo 3 iintsuku ungenazinxaki nto nangoku ndiyazi mna ukwenza ubomi lula ukuba abo benza dawnload umncedisi sam kuba bathi nakuba kukho apho broadband ukulanda elihle ukusuka kumncedisi yam filezilla unika ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Umntakwethu e Portugal download ifayile ukusuka kwiseva yam filezilla 200MB nerhafu 28kbp / s ye apho kukho band yakhe 20MB!
Apha broadband yam yam Iseva 2MB!
Ungakwazi ukwandisa izinga kuye okanye ingxaki ayikho kwi server yam filezilla?
Xa ke impendulo kule Ndiza post onke amava yam Akwazi ukwenza umsebenzi wam filezilla kuba kwakunzima kum kodwa zilawulwa ngoncedo Taylor Lopes nguye isilo!!!
Ndifuna ukufunda kwakhona ukunciphisa nendlela kuphela abantu benze ukulayisha nto ngakumbi kwaye ukudala abasebenzisi abaninzi ukunikezela iifayile ezahlukeneyo ukuze umsebenzisi ngamnye.
1 uJulayi 2011 ukuze 2:12
Instalei filezzila Server no uwine 7 64 utsotsi
Free nje portas 2100 e 2101 e firewall kunye umzila direncionando efanayo njengoko kufuneka yenziwe.
Musa ukuqhagamshela indlela ogulayo
Ndenza uxhulumaniso ukuvavanya site kubonisiwe kule FAQ filezilla http://ftptest.net/
Oku kubonisa ukuba kulungile
Halala! Umncedisi wakho uyasebenza kunye imizila assorted / firewalls ziye elungiswe sama- FTP plain.
Zive ukhululekile ukuvavanya omnye ngomnye abancedisi zakho ngokungenisa iinkcukacha zayo engezantsi.
Xa uchwetheza I yam no-ip:2100 ngeke
Awukwazi ukubonisa iphepha
Isixhobo okanye ekude resource akayi ukwamkela uxhulumaniso
umzila yam ApRouter WR 254HT
Mna ezifakwe komnye umatshini on Win XP kwaye isebenza kunye useto olufanayo ngabeka win 7
Linda intsebenziswano yabo bonke.
30 uJulayi 2011 ukuze 11:27
Claudio - zeCRS Computers wathi:
Le nto isebenza cool nokuba!!!
Ndachitha iintsuku ezimbini ufuna isisombululo kwingxaki transfer lendawo yam. Sebenzisa iseva lendawo EasyPHP 5.3.6.0 ngokudala amaphepha e web kwaye ayinayo iseva lomthonyama. Kwakufuneka ukunika imvume kwezinye iifolda iposi yakho yandinceda kakhulu, ngempela inkonzo yam okuqhubekayo. Tava phantse ukunika umxholo.
umbulelo! Qhubeka uqondisa oogxa bethu!
1 uSeptemba 2011 ukuze 15:45
Ingaba Claudio – Recife-PE kwakhona. indlela, ayikho nje ufake isixhobo ukuba wabelane ngeposi lakho. Bendiya ukuthumela yona yam http://twitter.com/#/CrsInformatica.
1 uSeptemba 2011 ukuze 15:49
hi Claudio, enkosi. Kukho ekupheleni post ilinki ebizwa “ukuveza”, esikuvumela ukuba wabelane. Ngokwenene akuyona ebonakalayo, Ndiyathemba ukuba sizokwenza ngcono ngayo… eyibambile!
1 uSeptemba 2011 ukuze 17:18
Kukho amaxesha kuba kunzima ukubeka ftp wam emoyeni. Nge blog yakho ingxaki yam isonjululwe kuqala. enkosi!
22 uSeptemba 2011 ukuze 10:33
URenata Gomes wathi:
isilo kum ingxaki xa Kofuneka nindixhase Ndinombulelo
ungakwazi ukungena ngaphakathi hayi ngaphandle ukufunda zonke izimvo ke akukho lutho
yam wabaza kuyinto touch speed 510 ngokubhalisa internet hi
ndandisele uqwalasele zibuko 21 e 20 kukho anazo neseva FTP lulungiswe wayisebenzisela
Andazi nto ndiyenza- okubi
faiz uye breaking intloko ngenyanga enye
ungavula abanye iminyango
sele Ndiye iingcango ezivulekileyo kunye kwisiza sesikhululo
yaye kubonakala kukho avule umnyango 21 kwaye nocango 20 tBM
al ndincede isilo
29 uSeptemba 2011 ukuze 4:42
oi, Ndikucebisa ukuba silandela inqaku setting, ukuba kakade ihlolwe kwaye ka- ningi I, umsebenzi Legal. ke, musa ukusebenzisa FTP port engagqibekanga 20, hayi 21. I nje ukwenza izimvo ngezantsi ukuze nabo kukukhonza, ubuke 6 uOktobha 2011 ukuze 20:44. ithamsanqa!
6 uOktobha 2011 ukuze 20:49
Mna sele umlozi yonke hehehhe aki
Okunye kundinceda sicela ai
29 uSeptemba 2011 ukuze 4:46
waphendula ngasentla! T +
Kwafuneka entabeni neseva FTP emsebenzini, ndaza ndazama ezinye izicwangciso. ojika, Ndaphela esiza ngeposi yakho. ngendlela, entle kakhulu.
kakuhle, ukuya iingxaki zam, Ndiyathemba kundinceda.
1. ndakhuphela, efakiweyo wazilungisa FileZilla, konke kulungile!
2. firewall silungiselelwe, konke kulungile!
3. Iqwalaselwe Imodem / umzila, konke kulungile!
4. I hlola endaweni, konke kulungile!
5. No-IP idilesi wadala, konke kulungile!
6. idilesi Pingo No-IP, konke kulungile!
7. I ihlolwe nge intanethi, NOT ukusebenza.
khona, le mpi yaqala:
8. Desativei arab e firewall. I ihlolwe site: konke kulungile! I uvavanyo lwangaphandle: lutho!
9. Ndenjenjalo isiza uvavanyo Online FTP Tester, uyafumana, logs, kodwa, yayingaphelele, eh wala, kwaye kwaphumela le:
Imposiso: Umncedisi wabuya unroutable idilesi ye IP yabucala PASV impendulo
Qinisekisa ukuba umncedisi isenokungaqwalaselwa ukuvumela uxhulumaniso nje indlela.
Ukuba iseva emva kumzila NATED, qiniseka iseva uyayazi idilesi yayo IP ngaphandle.
Uluhlu zamazibuko asetyenziselwa imo isixando kufuneka ivulwe zonke firewalls ababandakanyekayo.
Uluhlu zamazibuko asetyenziselwa imo isixando kufuneka zithunyelwe ngabo bonke imizila NATED ababandakanyekayo.
Zama uyikhuphe zonke firewalls uzifake ikhompyutha yakho ngqo kwi modem yakho, oko ngokudlula umzila.
Not sise FileZilla ukhetho: “Sebenzisa ezi zilandelayo IP em setings imo UMSI!” . Sebenzisa inguqulo 0.9.39
Q eh Ndiqonde into kwi Imodem / umzila, imodeli h a D-Link DSL-2640T, okanye isicelo “em IP mode UMSI”
Landela iilinki izikrini modem, ukuze andincede, ukuba kufanelekile:
umfanekiso 01 – http://www.comarket.com.br/downloads/tela-modem-01.png
umfanekiso 02 – http://www.comarket.com.br/downloads/tela-modem-02.png
Enkosi ingqalelo yakho. kwakhona, Sivuyisana, kuzo zonke izithuba q kuvavanywa, wakhe ngempumelelo kakhulu.
Ndifike nje naloo ngxaki kancinane. Ndilinde ukuba alunywe, isisombululo…
4 uOktobha 2011 ukuze 21:15
Ukongeza umyalezo odlulileyo:
I enza uvavanyo iingcango – http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
ichweba ukuskena 187.40.176.111
187.40.176.111 uyaziphendula kwi zibuko 2100 (amiganetfs).
187.40.176.111 ayiphenduli kwi zibuko 2101 (rtcm-sc104).
Ndifike nje naloo ngxaki kancinane. Ndilinde ukuba alunywe, isisombululo ...
4 uOktobha 2011 ukuze 21:28
oi, ibukeka, kungenzeka ukuba wenze omnye kwaba bathathu amathuba:
(1) Enye into ebalulekileyo kukuba ukukhulula Firewall ZOMBINI amazibuko esetyenziswa yi FTP. Ndasebenzisa umnyango 2100 (ukuze bahambe imiyalelo) yaye 2101 (ukuze stream data). Ukuba ngaba ukukhulula Firewall, Ngeke isebenze. phindaphinda: Liyeke izibuko data (2101) nayo!
(2) Njengokuba naye wathi ngasentla: truong, bayifumana, kuphela ukhethe ukhetho Sebenzisa oku kulandelayo IP setings mode UMSI. ngoku hamba!! ke, khangela olu khetho ku filezilla.
(3) xa test, sebenzisa DDNS NO-IP kuphela xa ungaphandle yomsebenzi womnatha. Ukuba wenze uvavanyo lendawo, ukusebenzisa IP yangaphakathi. Ndikhe ndabona iimeko (GVT) ukuba xa uzama ukufikelela micro ngaphakathi kwinethiwekhi yam, DNS ayisebenzi.
6 uOktobha 2011 ukuze 20:44
Tutorial kunye asebenza ngokupheleleyo heim. Siyavuyisana!!!
I balandela tutorial yakho, uvavanyo lendawo oku konke kulungile …
Kodwa ndisenayo iingxaki ukufikelela lwangaphandle, Ndiya ukuchaza ngezantsi iinkcukacha ukuze xa kunokwenzeka u nindixhase:
Firewall wenze iifestile:
Imposiso kunikezelo FTP lwangaphandle
Obs: On-site uvavanyo, konke kulungile kanye esebenzayo … ke mna ngale ubunzima sokufikelela lwangaphandle.
Bangacalula liyayishicilela, khangela ukuba mna ukwenza okulungileyo nindincede???
16 uOktobha 2011 ukuze 13:43
oi Eduardo, uzama ukulandela ukuba lo Inqaku lencwadi… Ndiyazi ukuba indawo nganye kunokuba iimeko ezahlukeneyo (iingxaki), kule meko, Kufuneka sifumane isizathu. Qala angasebenzi firewall (kuphela ukuphelisa uvavanyo, ke wena sele uyazi ukuba umba firewall). bona Sigaba! Ukuba ingxaki ezivela ngaphandle, okanye ukungaphumeleli kwi firewall okanye umzila, uhlole! Enye iinkcukacha Ndikhe ndibone kwenzeka bug ukuba xa ngaphakathi kumsebenzi womnatha wakho, Ungangena ngokusebenzisa IP endawo kuphela (Ex: ftp://10.1.1.2:2100 okanye ftp://192.168.0.2:2100… kucace, uvavanyo kunye IP kumatshini leyo filezilla). Xa ngaphandle kwenethiwekhi, ngamanye amazwi, endlwini umhlobo okanye kwenye indawo ongekho womnatha wakho, ngoko yes usebenzisa i DNS (okanye esebenzayo IP, ukuba wazi). Kubona nento I saphawula 6 uOktobha 2011 ukuze 20:44 (ukubona ngaphezulu). ithamsanqa!
16 uOktobha 2011 ukuze 15:26
20 uOktobha 2011 ukuze 9:12
hello Taylor, Kuyinto seguite, Ndenze yonke into kanye njengokuba kuchaziwe, ACECO ngaphakathi inethiwekhi yangaphakathi, kodwa ekuhambeni kwexesha ukuvavanya uthungelwano lwangaphandle, Ngabeka IP lam (elenziwe) kwaye kubonakala ukuba loguin ibhokisi, kodwa log kubonisa Impendulo elandelayo: “425 Ayikwazi ukuvula data.”
Umzila My ke 500B D-link indlea, kodwa yena lowo kanga ngqo inkonzo GVT, ngokuba imodem ikwimo ibhulorho.
ikhamera yam a Foscam FI8918W (It is on kwenye inethiwekhi), xa ndizama ukubeka kuyo ukufikelela FTP, Ndifumana Feedback elandelayo: “Impazamo kwi mode PASV. Nceda qiniseka ukuba imo PASV inkxaso server”
Yintoni ta engalunganga?
Ndiyaluthanda phulo yaye kunokwenzeka response'll kuba enombulelo kakhulu.
28 uOktobha 2011 ukuze 9:40
Opa, njengokuba benditshilo, FTP usebenzisa mazibuko mabini: umnyango 21 yaye 20. Xa imithetho yokuqala neyesibini yohambo, data. Hayi ukuba itshixwe kwezinye abasebenzi, Siye satshintsha la amazibuko ukuba 2100 e 2101, ngokulandelana. Impazamo wathi, Kuyinto ayikwazi ukuvula yokudibanisa i data (2101). ke, kubonakala firewall… ukuzama ukwenza nguye Inqaku. Namhlanje endiwumisileyo i FTP kumatshini ne Win 7, abafumana GVT Internet yaye kungekudala 5 imizuzu ukusebenza (ngaphandle ubaxo). Ngaphambi usebenzisa ikhamera kunye ezifana, azame ukusebenzisa ngendlela eqhelekileyo (okanye windows browser Explorer). On the mode kwisixando sokwenziwa, ubone apho ndithetha uxhulumaniso kwimo kwisixando, apho umfanekiso uye “Useto lwemo UMSI”. Ndikucebisa ukuba wenze njalo ukuvavanya unqulo firewall ukhubaze, nje ukuze, ukuba kukho ukuvaleka, kufuneka ukuba uyazi eyona ngxaki nokusombulula. Yabona, sebenzisa i-firewall yenziwe (ngaphandle ngenxa zamazibuko FTP) kunye Kaspersky unqulo kwaye isebenza kakuhle. ithamsanqa!
31 uOktobha 2011 ukuze 17:41
hello Taylor, Ndiza usebenzisa Windows ezisixhenxe yaye mna ukuba ingxaki efanayo. Sele I ezivavanyiweyo firewall kanye unqulo ikhubaziwe kodwa ufumana iziphumo. Idibanisa kwiiakhawunti FTP kwaye yonke kodwa passivated nasemva kwale mpazamo 425. Ndiyathemba iimpendulo. wola
23 uJanuwari 2012 ukuze 0:28
oi Petrus, Kufuneka ulandele kanye njengoko kuchaziwe. ukuba kuyimfuneko, alungise yonke into wena, kwaye uqale ukusuka ekuqaleni, inyathelo ngenyathelo. Ukususela mzuzu utshintsha into ekuphumezeni oko Article, ke ithatha ubungozi na umsebenzi. Nditsho lo, Kuba filezilla I ndimmisile + win 7 e 8 Imishini kwiindawo ezahlukeneyo, baqhubi ze Hi and GVT, ngaphandle kobunzima. Ndiyazi ukuba kwimeko nganye eyahlukileyo, kodwa qaphela ukuba lo! Ndiya kukukhumbuza nje wena izinto ezintathu:
(1) Qwalasela i Tela musa filezilla akukho menu “Izicwangciso Mode UMSI”, Kuyinto belingana Article ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ).
(2) In GVT yomsebenzisi, Ndiye iingxaki sowufumana i FTP evela ngaphandle, ukuba kuthungelwano apho FTP ifakiwe. echaza, xa kwi LAN mnye iyasebenza FTP, sebenzisa IP ebandayo umncedisi wakho, into efana 192.168.0.21, ukudibanisa kuwo; musa ukusebenzisa DDNS (DynDNS okanye NO-IP)! Kodwa xa wena ngaphandle, endlwini okanye Internet umhlobo cafe, yes ngoko sebenzisa DDNS.
(3) Yiya computer yakho isonokungasebenzisi inkonzo FTP kunye nokuqwalasela womnatha iadaptha ye IP fixed, njengoko 192.168.1.21. Qaphela ukuba lo mncedisi IP FTP kufuneka esisigxina, ukuze uyixele umzila wakho ukuba batshintshe. Ukuba ngokusisigxina, ukuze ekugqibeleni kwenzeka ukuba Izakutshintsha DHCP eyabelwe IP kwaye kwakhona uqwalaselo lwe umzila wakho akayi kuphinda ngokwalatha server yakho FTP
Ukuba ukufumana isisombululo kwingxaki yakho, sicela izimvo apha, ukuze abanye baqonde, falouuu…
23 uJanuwari 2012 ukuze 7:52
hello Taylor, Ndiza kuzama ukuba enza ngayo. Kodwa ngaphambi kokuba ndiya yokufomatha PC ne Windows reeinstalar. Qha, kodwa sele mna lo PC ngeentsuku ezimbini ingxaki wesibini, omnye waba kukuba ne-Firefox tava hayi kwindlela yokungena ikwi modem nkqu iphasiwedi elungile. Ngoko xa uqala ngezi besteirinhas oko kuba iifestile sele frescando. Kamsinya nje ukusombulula ingxaki, I post apha. Enkosi ingqalelo.
23 uJanuwari 2012 ukuze 9:42
I efomatiweyo lo PC, olufakwe zonke kanye le ndlela apho kuqhubeka nokunika imposiso 425 xa FTP uzama ukufikelela ngaphandle…
26 uJanuwari 2012 ukuze 4:37
Xa ufikelelo nge Google Chrome kubonakala:
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> Ixhume, ukuthumela umyalezo wamkelekile…
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 220-version Umncedisi FileZilla 0.9.40 beta
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 220-ebhalwe ngu Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 220 Nceda ndwendwela http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> USER admin
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 331 efunekayo Password for admin
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> PASS **********
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin (177.40.224.216)> 230 ungenile
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin (177.40.224.216)> 215 UNIX eliboniswa FileZilla
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin (177.40.224.216)> 257 “/” na ulawulo lwangoku.
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin (177.40.224.216)> 200 Uhlobo ibekwe ku I
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin (177.40.224.216)> 229 Ingena Indlela UMSI Extended (|||2101|)
(000009)26/01/2012 04:37:50 – admin (177.40.224.216)> 227 Ukungena Mode Umsi (192,168,1,2,8,53)
(000009)26/01/2012 04:38:11 – admin (177.40.224.216)> yekani
(000009)26/01/2012 04:38:11 – admin (177.40.224.216)> 221 Sala kakuhle
(000009)26/01/2012 04:38:11 – admin (177.40.224.216)> inqanyulwe.
Xa ufikelelo nge FiliZilla Client kubonakala ukuba:
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> Ixhume, ukuthumela umyalezo wamkelekile…
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 220-version Umncedisi FileZilla 0.9.40 beta
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 220-ebhalwe ngu Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 220 Nceda ndwendwela http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> USER admin
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> 331 efunekayo Password for admin
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (Awungenanga ngemvume) (177.40.224.216)> PASS **********
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin (177.40.224.216)> 230 ungenile
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin (177.40.224.216)> 257 “/” na ulawulo lwangoku.
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin (177.40.224.216)> 200 Uhlobo ibekwe ku I
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin (177.40.224.216)> 227 Ukungena Mode Umsi (192,168,1,2,8,53)
(000011)26/01/2012 04:39:41 – admin (177.40.224.216)> 425 Ayikwazi ukuvula ifayile yeenkcukacha.
Sele I yahlolwa avira firewall off.
26 uJanuwari 2012 ukuze 4:40
Ndagqiba ekubeni nayo le ngxaki!
tava ilahlekile kuphela kwizibuko ngqo 2101 IP yam yangaphakathi kwi modem.
I wayethe kuphela 2100 njengoko uthi tutorial.
26 uJanuwari 2012 ukuze 5:23
Taylor Lopes, enkosi izifundo, yonke into ihamba apha.
Peter, yayo indlebe yam yasindisa.
13 uMatshi 2012 ukuze 15:53
okulandelayo…benza yonke CesarFTP tutorial, Kodwa xa ungaphandle nokuba ukufikelela okanye ngemvume izicelo, I eyenziwa DynDNS…Ndayibeka khona engenazintambo TP-Link TD iingcango certinho 21, 2100 e 2101…kodwa watsho phantsi, Ndayibeka khona ezizodwa kunye nemithetho e Firewall kunye nto Windows…o Sistema eh Windows Server 2008 R2…yintoni ekufanele ndiyenze, ukuba unako ukubaqhelisa beninam kwasekuqaleni kuba ndicinga ityala lam inokuba nomahluko ukuba Server Windows 2008 kwaye ayikho ezinye zoqwalaselo…kuhle, kundinceda!
31 uOktobha 2011 ukuze 16:52
Opa, donsa, Windows Server andinako ukukuxelela ukuba unayo nayiphi na peculiarity. Andiyi le S.O.. Ndiyazi ukuba namhlanje kwafuneka ukufaka i FTP kumatshini ne Win7 + Operator GVT kwaye esebenza ngokugqibeleleyo, Oku akazange athathe 5 imizuzu ukuba ulungiselele. Kungenxa le… wathetha, eyibambile!
31 uOktobha 2011 ukuze 17:47
Nosipo o Windows 7 It iyafana njengomncedisi 2008, Kodwa abanye eguqula OPTIONS izifundo, kodwa iinkcukacha qlqr lungawenza umahluko, kodwa ibe q umzila modem TBM isebenza injono izinto endizifunde ukubuyekeza, Ndiya kumbeka, mhlawumbi nokusombulula, le modem ukusuka ifowuni q tbm eh umzila…q eh ucinga kuphela icala RS ezikhoyo
1 uNovemba 2011 ukuze 23:28
kuqala, kufuneka ukuvavanya evela ngaphandle (intanethi -> LAN) ukuba amazibuko FTP avulekile. Faka le ndawo http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ yaye iingcango (2100 e 2101, okanye umntu ukuba uqwalasele). Ukuba emazibukweni ukuvula, ngoko kutheni na umzila bakho silungiselelwa njengoko kuchaziwe kwiSiqendu (NATED) okanye ngenxa yokuba inethiwekhi yakho inaso imizila ezimbini. Kwimeko yokugqibela, kufuneka ubeke umzila yokuqala udityanisiwe kwi Internet ikwimo ibhulorho (Ponte), ukuze udlulise kwemali ngqo ukuya kumzila yesibini. Zama ukuba uyazi eyona ngxaki… falouuu!
2 uNovemba 2011 ukuze 9:19
Yeyona inethiwekhi 2 imizila, omnye TP-LINK Wireless zendlela ne modem Telefonica…kulo mzekelo kufuneka Ndiyaqhubekeka njani, ekubeni bobabini wamisa Umncedisi Virtual ukukhulula iminyango 21, 2100 e 2101?
3 uNovemba 2011 ukuze 8:12
Taylor, Mna ndiza kukubuza…o modem ta ip cm 192.168.1.1 kunye engenazintambo 192.168.0.1 yaye ke ngoko olu iikhompyutha station MSM subnet njengoko engenazintambo…impembelelo modem kule 192.168.1.x subnet?
8 uNovemba 2011 ukuze 12:31
oi Levy, azinampembelelo… kananjalo, Kuba njengoko isebenza. umzekelo:
Umsebenzi zendlela ukuba xhuma nje networks ezimbini ezahlukeneyo… kunjalo, I sicebisa ukuba umzila ufumana IP esebenzayo kwi Internet (kwaye akukho IP ebandayo, njengokungathi Umzekelo). ke, ukwenza oku, kungcono ukuba silishiye eli imodem Bridge (Ponte), ukuze yonke flow ngena it kuyinto is iyahanjiswa ngqo umzila, oko kukuthi nokuba abadlulayo ukuqinisekisa (uHlelo) ecaleni umniki-Internet wakho.
5 uJanuwari 2012 ukuze 11:09
ke, umsebenzi ngaphandle, kodwa kuphela Firefox, Andikwazi ukufikelela FTP ye Internet Explorer leyo nto ibalulekileyo, ekubeni abathengi basebenzisa kuphela IE = /…ukuba ndiyayazi into endiya kuyenza ukuvula i Umncedisi FileZilla FTP e IE?
23 uJanuwari 2012 ukuze 10:24
Engazi ukuba kukho ingxaki ekufumaneni i FTP ngu IE… kananjalo, uvavanyo nje apha IE kunye runs epholile. Ikhwelo kufuneka zenziwe usebenzisa i FTP protocol:// (hayi http://), into efana ftp://192.168.0.21:2100, apho 192.168.0.21 i IP yomncedisi FTP (filezilla) e 2100 Yeyona ethekwini ukucwangcisa FileZilla ukuba silinde uqhagamshelo FTP. enengqondo, IP kulo mzekelo kusebenza kuphela kwi womnatha yakho yangaphakathi… ukuba usebenzise i-Internet kufuneka udale i DDNS, njengoko kuchaziwe kwinqaku.
27 uJanuwari 2012 ukuze 22:22
Fabio Dias wathi:
mholo, Ndithanda ukubulela ngenxa ngofundiso enkulu, ngokuqaphela ukuba okungenani apha umzila yam a Dlink DIR300, i “bug” anavuma babhukishe ip, ex: 192.168.1.140 ukuba iseva yam, ukuvumela IP DHCP ukunika wifi yam, Ndayibeka khona IP ukuba umzila iye yanika uyisa ngaphakathi kumzila me (port ungasithumela) yaye ukulungele, isigqibo, Ndenze yonke into enjengale na uthi Mhlobo manual, nangaphandle kwale ukumbambezela anayo DIR300 yam, wasusa elihle. enkosi kwakhona.
30 uNovemba 2011 ukuze 19:50
oi, ukuvumela DHCP iqwalaselwe umzila ukuba zinyule IP band ethile, nje umzekelo 192.168.1.100 a 192.168.0.200. Ke yiya kwi khompyutha yakho isonokungasebenzisi inkonzo FTP kunye nokuqwalasela womnatha iadaptha ye IP fixed, njengoko 192.168.1.21. Qaphela ukuba lo mncedisi IP FTP kufuneka esisigxina, ukuze uyixele umzila wakho ukuba batshintshe. Ukuba ngokusisigxina, ukuze ekugqibeleni kwenzeka ukuba Izakutshintsha DHCP eyabelwe IP kwaye kwakhona uqwalaselo lwe umzila wakho akayi kuphinda ngokwalatha server yakho FTP. Falouuu…
5 uJanuwari 2012 ukuze 11:29
Kodwa le yinxalenye umzila kuyimfuneko ngokwenene?? Kufuneka ube zendlela ukwenza le ufikelelo umzekelo ovela kwelinye ilizwe?? I nje ndalifumana aki modem ekhaya wengingqi ukufikelela ukusebenza ngokugqibeleleyo kodwa xa ndiyazicikida abahlobo non funfa ekhaya usebenzisa IP esebenzayo umnatha kunye IP yam ayitshintshi kuba PC yam iyavalwa ke modem yedwa! ukuba sinokuba iingxoxo email kukuba kufuneka ngokwenene ufikelelo ezinjalo ngeenjongo zoshishino.
5 uJanuwari 2012 ukuze 10:48
Phendula ngezantsi… wathetha!
17 uJanuwari 2012 ukuze 8:18
Kuya… ukuba unayo umatshini enye kuphela, plug nje ngqo kwi modem yakho ADSL, Wena Akudingeki umzila. Eyona nto ibalulekileyo kukuba ukuze ubone ukuba icomputer yakho enqamleza kumncedisi FTP ufumana IP esebenzayo. Kufuneka wenze ikhwelo FTP usebenzisa IP esebenzayo ukuba umatshini wakho ufumene (okanye igama wadalwa DynDNS okanye No-IP), esimazisa protocol (ftp hayi http) kwaye nocango (21 okanye 2100) Wamisa umncedisi wakho FTP ukuphulaphula. khona, phakathi browser kunye nohlobo ftp://seuUsuario@seuIPValido:suaPortaFTP, umzekelo: ftp://admin@189.75.34.242:2100
5 uJanuwari 2012 ukuze 11:38
Imposiso xa uvula le eneenkcukacha kumncedisi FTP qinisekisa ukuba u kufuneka A MVUME ukufikelela eneenkcukacha
200 hlobo kubekwe ku A
421 andikhumbuli t Ayinakwenza umngxunya
Ngaba umntu kundinceda ntoni inkqubo ukuthatha le mpazamo?
27 uJanuwari 2012 ukuze 0:15
Qwalasela i Tela musa filezilla akukho menu "Umsi Izicwangciso Indlela", Kuyinto belingana Article ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ). iminyango 2100 e 2101 Kufuneka ngomnyaka firewall. zagcina, ubone ukuba kungekhona yintsholongwane uvimba (ukukhubaza oku okwethutyana ukuze uqinisekise). Yenza umsebenzi FTP asekuhlaleni (ftp://127.0.0.1:2100), yaye emva koko kuphela ukuvavanya i Internet usebenzisa DDNS uze ukhathazeke ngokugqithiseleyo ukwenza ukufumana enye indlela olululo amazibuko kwi umzila. Falouuu!
27 uJanuwari 2012 ukuze 23:06
Taylor, ngexa nimane kule guy, Oko tutorial wenu mkhulu, yaye ndiqinisekile ukuba apha:
“oi, oku kuthetha ukuba umnyango luvuleleke ngayo kweyakho imodem / umzila, kodwa qinisekisa ukuba i "Iseva Virtual" (NATED) Wena ayalwa ukuba IP yakho yekhompyutha apho Umncedisi Filezilla ifakiwe. Ndibabonile abanye abantu iingxaki xa zivela ngaphandle (Internet) ngaphakathi (LAN), kuba ngaphandle kokwazi indlela kabini ... kuba ukuba ezinye iimodem nazo imizila, khona, kule meko, Kufuneka ulungiselele NATED, ngamanye amazwi, ukwenza ADSL modem (kuwo nakho kumzila) kwaye umzila (ngokuqhelekileyo wireless).”
Yilaa mna nzima, Use Kapernawume modem Sagemcom F @ st kumzila 1704 (GVT), kodwa akaba nako ukusombulula inxalenye yesibini, njani na abafundi bakho messed le modem kwaye likwazile ukusombulula iingxaki?
27 uJanuwari 2012 ukuze 20:04
okulandelayo, lo comment kusisilumkiso KUPHELA kwabo imizila EZIMBINI. Ukuba ityala lakho, indiva! Ngokuqhelekileyo sibe modem ADSL kunye engenazintambo; kangaka. Ingxaki kwenzeka ukuba le modem umzila ADSL nayo linomsebenzi. ke, ukuphepha amaxesha umzila dua, phakathi panel yokulawula, into efana http://192.168.1.1 (admin, gvt12345) kwaye ukuqwalasela modem usebenze kwimo ibhulorho (Ponte). Kodwa lindela ukuba oku ndiya kuyaphula uqhagamshelo yayo GVT kwaye mhlawumbi eqhoshayo modem wireless / umzila (ukuba unayo). emva koko, le modem iya kusebenza kanye njengokuba “Ponte” (kanti akukho umzila), ngokudlala uphawu intanethi kunye IP esebenzayo umzila wakho. Kuya kufuneka ukuba bafune ulwazi ukuze wenze njani umzila wakho kuba noxanduva lokuseka kudityaniso GVT, ukususela modem akukho kuphinda kuyenza. umzekelo, e DLink wam umzila I ukuseta uqhagamshelwano eyayiza kuba modem kwi Cwangcisa> Internet> Connection Internet Khetha Manual> Uhlobo Connection Internet> Connection Internet yam : uHlelo (Igama lokusebenzisa nephasiwedi). Kwimeko yakho, Awuyazi. Silumke iphele ngaphandle internet…
27 uJanuwari 2012 ukuze 22:55
Peter Henrique wathi:
Ndikwazi ukwenza yonke into elungileyo, njengoko ukwaziswa ngenye post. Kodwa ke ingxaki, xa ufikelelo kwi computer yam okanye yekhompyutha kwinethiwekhi yam, kunye IP yam lwangaphandle, nkqu no-IP, konke kulungile! Kodwa xa ukufikelela kwenye ikhompyutha ikhompyutha wam ukuphendula kwaye ngamanye amaxesha ixesha umda aphela ekwenzeni amathontsi uqhagamshelwano. I bewenzile; ngelixa ukwenza umxokozelo, kwaye ephatha ukuba donwload, kodwa ke khange ndiyenze kwaye baqhubeka into efanayo. Ingaba unayo nayiphi na ingcamango yini?
28 uJanuwari 2012 ukuze 1:27
Kweli nqaku, Ndenza uqwalaselo wesixando uluhlu imo port ukuba kuphela 2101 (data); le ngabom, kube lula inkcazo kunye kumzila uqwalaselo (ukufumana enye indlela) e ukwenza firewall (wenkululeko). kunjalo, kwimeko uxhulumaniso ezininzi ngaxeshanye, kusenokufuneka ukwandisa eli zibuko uluhlu imo nje, ezinye uhlobo 2101-2301. ecacileyo, kuza kufuneka ukuba la amazibuko, ngaphaya FTP (Filezilla), Kwakhona kwi kumzila firewall.
A uqhagamshelwano nje, xa umxumi esenza isicelo transfer (FTP), iseva, ukuba ulindele (amatyala) uxhulumaniso, Kuba ngubani uxelela umxhasi kwi zibuko i data ziya baguqula. Wonke isicelo entsha, iseva kanga umxhasi usebenzisa izibuko ngenhla, kutheni kufuneka kwandiswe uluhlu uyezibuko data, ukuba uvumela uxhulumaniso ngaxeshanye.
Mhlawumbi ingxaki yakho sexesha sokulinda kanye kuba nezibuko data 2101 ahluke, ukuze ukuba kukho yebhotile kuqhagamshelwano ezilandelelanayo, ekubeni nezibuko igcinelwe ngumthengi ngexesha elisebenzayo.
ke, apho Filezilla apho ibanga "Izicwangciso Indlela Umsi" ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ) imiselwe ku 2101-2101, ukutshintsha kwinto efana 2101-2301. Kulo mzekelo uya kuba uluhlu / uluhlu 200 amazibuko kwabelwane data. Kodwa musa ukulibala ukwazisa break ke umzila kunye firewall!
28 uJanuwari 2012 ukuze 8:55
Siyabonga Taylor, isigqibo! I hlola iindawo eziliqela nje ixhomekeke. blog yakho phawula 10!
28 uJanuwari 2012 ukuze 23:59
Siyavuyisana ebusweni tutorial, entle kakhulu, Ngelishwa kodwa andiyi, mhlawumbi mna engumshumayeli kakhulu.
Tsala intanethi Hi / Velox 2MB of kufuphi nge RJ-45 intambo PC lam. I babe Windows 7 Ultimate 64 utsotsi, endlwini liye a ZTE ZXDSL Series imodem kokuthumela uphawu ukuya Encore ENHWI-N3 umzila. Ndenze yonke into, liberei of Filezilla Interface to Filezilla akukho Firewall, free nje portas 2100 e 2101 Kananjalo Firewall. Ndazama kunika IP wam wasekhaya kwi modem kwaye umzila, reteador ukubeka IP kwi modem kwaye akukho. Akukho ou, ndinike ukukhanya, ndiyacela!
2 uFebruwari 2012 ukuze 3:05
Maciel, nzima ukuba akwazi ukukunceda musa yesiphene esithile. Enyanisweni kufuneka babe nolwazi ezinye indlela yokusebenza / ikhompyutha ngokwandisa FTP, ingakumbi xa unika ingxaki. Thatha wokufundwayo cwaka amagqabaza angasentla, ingabona ingxaki / isisombululo. kuqala benze umsebenzi ohlala Filezilla (ftp://127.0.0.1:2100), yaye emva koko kuphela ukuvavanya i Internet usebenzisa DDNS uze ukhathazeke ngokugqithiseleyo ukwenza ukufumana enye indlela olululo amazibuko kwi umzila.
4 uFebruwari 2012 ukuze 13:52
umhlobo, ulonwabele olu sifundo yakho, kakhulu unengxaki! I sebenzisa i modem 3G ephila yaye xa usebenzisa i-IP yangaphakathi kumncedisi FileZilla FTP ivula, kakhulu ukuba ukusebenzisa ip modem ayisebenzi QAPHELA: Ndivula site kubonisiwe kunye uqhagamshelwano nganye entsha modem kuba siyazi ukuba IP utshintsho yonke uxhulumaniso entsha 3G. Ndiyayibulela ukuba u nindixhase kule kwamathandabuzo!
4 uFebruwari 2012 ukuze 13:18
rafael, Andizange ndifumane ukusebenzisa FTP 3G; Andazi ukuba kukho abathile ukuvaleka eyenziwa ngumsebenzisi. nokuba le, Ukuba imodem yakho 3G elidityaniswe ngqo kwi khompyutha yakho / incwadi yamanqaku, NGAPHANDLE umzila, ngoko kufuneka usoloko ukufikelela iseva FTP (filezilla) kunye esebenzayo IP Internet, oko kunokubonwa http://meuip.info/. Ngokusengqiqweni oku IP utshintsha yonke uxhulumaniso, isizathu sokuba kube kuphakanyiswa ukusebenzisa DDNS DynDNS okanye No-IP. Kuye iwebhusayithi kukuvumela ukuba uphathe FTP yakho, nje musa ukulibala ukutshintsha ulwimi “IsiPhuthukezi” kwaye uhlole khetho “bayahlala”: http://www.net2ftp.com/
4 uFebruwari 2012 ukuze 13:42
Yanceda kakhulu, Sivuyisana igalelo.
umbuzo, kuba isebenzisa emnyango 2101 kunokuba 21?
5 uFebruwari 2012 ukuze 23:36
oi, isizathu sokuba olu tshintsho ndicacisa ngokukhawuleza kule Post ngasentla kwaye kwakhona kwi-Post http://taylorlopes.com/?p=1021, kodwa ishwankathela oko kungenxa abanye ababoneleli ADSL ukuvala i FTP port engagqibekanga (21). Falouuu, eyibambile!
6 uFebruwari 2012 ukuze 7:04
indlela, ukubona kuphela, I Ungangena ekuhlaleni ngaphandle kwee ngxaki, nge umkhondo 2100. kunjalo, kwenye ikhompyutha mna ke andinako nokuba ukufikelela ukhetho ukubeka igama kunye nephasiwedi, nge-ESTA emnyango. Strange kukuba, xa ndibeke ucango 21, igama ukhetho kunye nephasiwedi weza. ngeke, ke, Ndikwazi ukufikelela nge zibuko 21? Emizameni yokuqala, xa wabeka password kunye negama, akazange ukusebenza. Ndicinga ukuba kunokuba lula ukukhulula emnyango 21, hayi? Ngenxa yokuba kwabonakala igama elilo phezulu kunye negama kuye… Ndazama nge no-ip, kwenye ikhompyutha evela kwenye inethiwekhi.
PS.: Nofikelelo nge FTP Tunneling kulula ukwenza? It has ingozi abathile kwelo?
10 uMatshi 2012 ukuze 17:51
Ekuhlaleni isebenza, kwenye ikhompyutha kwaba ukusebenza… ubone ukuba asiyiyo na unqulo, ngokutsha useto firewall njengoko Post, etc… nezibuko data kufuneka nazo akhululwe (2101)… ingaba seso, imisebenzi, Ekubeni ifowuni kwenziwa ngokuchanekileyo. No-IP yinto yokugqibela kufuneka ukhathazeke… ukufikelela ukusuka PC ukuya kwenye, zama ukwenza umnxeba yi IP (okanye igama)… Kufuneka ukuba ube ethile ingcamango yothungelwano… falouuu!
16 uMatshi 2012 ukuze 19:17
mholo! Bulelani sokuqala kwisikhokelo.
Mna ingxaki abanye baye: Andikwazi ukufikelela umncedisi nge IP ngaphandle. Ndizame yonke, desativei anti-virus e firewall, saqulunqa yonke into, akukho. Luyaqhubeka iminyango t1shopper.com kwafunyaniswa ukuba azikhutshwa. hayi 21 hayi 2100 hayi 2101, kunjalo, izilungiselelo zendlela (d-link 524 – 150 wireless) ukuba ubonakale ivulwe. Ndaye ndaqaphela ukuba kumzila wam akukho ndlela yokufumana i-SPI uqwalaselo, inokuba ingxaki?
Siyabonga kunye igudla!
13 uMatshi 2012 ukuze 12:48
Akubonakali ukuba ingxaki SPI ... ucango kufuneka evulekile uvavanyo ... kufuneka ubone ukuba kumzila wakho "ubuso" kwi-intanethi, ngamanye amazwi, ukuba yena lowo elidityaniswe ngqo kwi Internet okanye ukuba kukho nakuphi na umlamleli kweli bali ... ukubona ukuba umzila na kwi Internet, nje uvakashele izicwangciso zakho ze ibrawuza ukhangele ubume ukuba ufumene IP Internet esemthethweni ... ukuba i Internet ekwabelwana, uhlobo radio, okanye into, ke ngoko kuya kuba nzima, ngaphandle kokuba ufumane i kumzila ephambili (kwi the internet) ukwenza ukufumana enye indlela (NATED) kuwe ...
16 uMatshi 2012 ukuze 19:25
wokuhlola, tutorial yakho elungileyo kakhulu, Sivuyisana!
njalo, I Ukumisa FileZilla, lakhupha emasangweni yaye sussa, Kodwa uyakwazi ukufikelela kuphela eneenkcukacha xa usebenzisa yobulali benginginya.
Xa uzama Access Remote, ucela wegama eligqithisiweyo, kwaye anike lokuphuma. Nje ukungena.
200 Uhlobo imiselwe ku A
ekugcineni, akayi ukude! :\_
Nayiphi na ingcamango yini?
omnye umbuzo: Ungenza host ufikelelo olusisiseko “hostdeexemplo.no-ip.org” endaweni yokusebenzisa i IP??
17 Epreli 2012 ukuze 1:40
Ulandela lo LOG okwenzekayo ngoku zokufikelela ibrawuza kwindawo yobulali benginginya. Yeyona log efanayo xa umntu ezama card ukungena.
Ukuba uyakwazi ukunceda njani mna, ukubonga ukususela. :D
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (Awungenanga ngemvume) (127.0.0.1)> 220-version Umncedisi FileZilla 0.9.41 beta
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (Awungenanga ngemvume) (127.0.0.1)> 220-ebhalwe ngu Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (Awungenanga ngemvume) (127.0.0.1)> 220 Nceda ndwendwela http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000084)17/04/2012 01:48:03 – (Awungenanga ngemvume) (127.0.0.1)> USER guest
(000084)17/04/2012 01:48:03 – (Awungenanga ngemvume) (127.0.0.1)> 331 efunekayo Password for convidado
(000084)17/04/2012 01:48:09 – (Awungenanga ngemvume) (127.0.0.1)> PASS
(000084)17/04/2012 01:48:09 – guest (127.0.0.1)> 230 ungenile
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> 215 UNIX eliboniswa FileZilla
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> 257 “/” na ulawulo lwangoku.
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> TYPE I
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> 200 Uhlobo ibekwe ku I
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> 421 Ayinakwenza umngxunya.
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> yekani
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> 221 Sala kakuhle
(000084)17/04/2012 01:48:17 – guest (127.0.0.1)> inqanyulwe.
17 Epreli 2012 ukuze 1:50
hello Taylor, Mna Karlos Bahia, I hlola iindawo eziliqela kunye phezulu certinho.Aprovado kaThixo, blog yakho phawula 10!
5 uAgasti 2012 ukuze 19:36
I i modem D-Link, inxibelelene reteador Wireless AP-umzila
Andizange ukufumana olu khetho NATED
Ngenisa uqwalaselo kodwa akukho.
Okanye ngaba kufuneka ufake useto imodem D-LINK?
Nge i internet 15 MB, ukudluliswa cool?
uhlobo, iseva kungaba 10 MB, umthengi (Uya kuthumela uya 1MB okanye 2MB umzekelo) isebenza kakuhle?
31 uAgasti 2012 ukuze 18:58
zethu, Ndachitha lonke veki kuyo kwaye akukho.
Mna umfuziselo D-Link eqhagamshelwe reteador, Andikwazi kufumana nto kumzila yam ezinxulumene ukhetho NATED.
Emva koko inqanyulwe intambo ethumela ukuba umzila, ngokunjalo, kwaye conetei uthungelwano cable ngqo PC ukuba ufake iinketho modem, sele kukho kukho ukhetho NATED, Ziziphi iimeko akazi ukuba eli lungelo kuba yena ihlukile kweyakhe.
Kodwa xa ndizama ukudibanisa i FileZilla Client :
wombuso:	kokuxhuma 201.58.59.125:2100…
wombuso:	uqhagamshelo behluleke “ECONNREFUSED – Umdibaniso walile server”.
imposiso:	Ayikwazi ukudibanisa kwiseva
wombuso:	Imele ukuba uzame…
3 uSeptemba 2012 ukuze 18:35
Lemposiso kwenzeka kunye nam CesarFTP:
Imposiso lo ncwadi eneenkcukacha kwi FTP server. Qiniseka ukuba unemvume ukunikezela i eneenkcukacha.
200 Lubhale beka ngempumelelo
227 Ukungena Mode Umsi (ip)
Ndiqwalasele kwizibuko 21 Ndiqwalasele kwizibuko 2048-2148 Ndiqwalasele kwizibuko.
11 uSeptemba 2012 ukuze 22:42
24 uSeptemba 2012 ukuze 20:26
Ndiqwalasele kwizibuko wathi:
indlela , Ndiqwalasele kwizibuko. Ndiqwalasele kwizibuko , Ndiqwalasele kwizibuko. Ndiqwalasele kwizibuko. Siyabonga
25 uSeptemba 2012 ukuze 1:28
Ndiqwalasele kwizibuko (http://taylorlopes.com/?p=1381&cpage=1#comment-16173) Ndiqwalasele kwizibuko, Ndiqwalasele kwizibuko, Ndiqwalasele kwizibuko (127.0.0.1) , Ndiqwalasele kwizibuko (192.168.0.3), Ndiqwalasele kwizibuko (ex: 188.155.22.245).
Ndiqwalasele kwizibuko, Ndiqwalasele kwizibuko “Ndiqwalasele kwizibuko”Ndiqwalasele kwizibuko (ex: Ndiqwalasele kwizibuko), Ndiqwalasele kwizibuko “Ndiqwalasele kwizibuko / Ndiqwalasele kwizibuko ….500 impazamo yokuma kwezivakalsi, Ndiqwalasele kwizibuko” Ndiqwalasele kwizibuko, Ndiqwalasele kwizibuko “Ndiqwalasele kwizibuko:// ” Ndiqwalasele kwizibuko ” FTP:// “. Ndiqwalasele kwizibuko.
Obs: Ndiqwalasele kwizibuko “Ndiqwalasele kwizibuko:” (e “Ndiqwalasele kwizibuko” e “Ndiqwalasele kwizibuko) Ndiqwalasele kwizibuko , Ndiqwalasele kwizibuko, Ndiqwalasele kwizibuko.
27 uJanuwari 2013 ukuze 2:57
Ndiqwalasele kwizibuko, ngelo xesha, Ndiqwalasele kwizibuko:// (hayi http://)? Ndiqwalasele kwizibuko, sebenzisa IP do lendawo servidor FTP, ukuba ungaphandle yomsebenzi womnatha wobulali, ngoko sebenzisa i domain okanye No-IP DynDNS, kuba ndizibonile le ngxaki engaqhelekanga kwenzeka. Qinisekisa ukuba i-No-IP Kwandile ihlaziywa nge IP entsha, xa kukho utshintsho; Apho isiza No-IP na isicelo ukuba uyakwazi ukufaka kumncedisi ukuba elumkisa No-IP ixesha ngalinye idilesi utshintsho… wathetha!
27 uJanuwari 2013 ukuze 9:47
ke, okanye FTP isebenza, Ndiza lonxulumano kwi-Android usebenzisa isicwangciso intanethi Tim Infinity. I Ungangena umncedisi nge eziguquguqukayo ip, I ukudlulisela kwifayile (kodwa isantya kade eh wabona ukuba ukusetyenziswa 2G ).
O ingxaki ayikho ngokwenene akukho-ip, Ngena kwi filezilla ukufumana le ngcaciso ilandelayo xa bezama ukufikelela lenginginya iqwalaselwe.
” Ndiqwalasele kwizibuko / Ndiqwalasele kwizibuko
500 impazamo yokuma kwezivakalsi, umyalelo engaziwa
500 impazamo yokuma kwezivakalsi, umyalelo engaziwa”
Obs: Mna zokufikelela Chrome zincwadi Android.
Le bhokisi kumncedisi, ngaphezulu isicelo njengoko HTTP, kwaye ngelishwa, Andikwazi kufumana kwi setting site ukuba acele FTP.
OBs: I wadala ukubhaliswa DynDNS, kodwa emva “intloko site kwincam”, Ndafumanisa ukuba ayenzi ukunika ngaphezulu ukufikelela simahla.
27 uJanuwari 2013 ukuze 20:09
Ufa, esebenza ngayo! Landela tutorial ngokupheleleyo, kodwa akazange akwazi ukudibanisa nge Internet, ngoko ke ukulandela amacebo wabeka modem kwi ibhulorho, abaphumelela uHlelo kumzila ungqinisiso Pro. Isebenza ku ngexesha!
31 uJanuwari 2013 ukuze 22:29
molo, I wonder ukuba kuya kusebenza kakuhle ukuba idityaniswe umzila hard yangaphandle drive (i TP-Link TL-WR1043ND linomsebenzi iseva ifayile, umzekelo).
Oku kunokwenzeka kunye Seagate GoFlex Net Media Sharing Icebo (STAK100) kunye yangaphandle hard drive eyabelwe kuyo, kodwa andikwazi ukufumana le STAK100 yokuthengisa e Brazil (nje ndafumana iwebhusayithi eyayinesihloko kodwa kuyabiza kakhulu iindleko 5x, okuyinto eziqengqelekayo).
26 uFebruwari 2013 ukuze 14:16
molo, kuphela zendlela musa ukubona indlela, kakade ukuba awukwazi ukufaka Filezilla.
28 uFebruwari 2013 ukuze 20:59
hello umhlobo, Ndandingakwazi ukufumana uqhagamshelwano lwangaphandle, has isisombululo?
19 uMatshi 2013 ukuze 22:11
Marcos, jonga kwi nokubuyekezwa osebenza nabo kunye neempendulo, kunokunceda. Okanye ukuba ngakumbi ngqo kwi umba ukuqonda ukuba ngcono… wathetha!
29 uMatshi 2013 ukuze 21:56
Taylor, Sithi halala kwi eposini kunye nomonde eboniswe kangaka kude; Ndifumanise le kokufundisa ilungileyo ukuqwalasela FileZilla kwi umnatha. enye kuphela caveat: le nkqubo kufuneka ukuba iifestile firewall i FileZilla server, hayi FileZilla server interface, ezithile?
Ndiza gcina iliso kwi blog yakho ukuze ubone ukuba ufunde kabanzi.
4 June 2013 ukuze 23:25
enkosi, rodrigo. indlela, e 2010 xa uthumela ileyibhile wayeze filezilla interface server. Andazi ukuba oku itshintshile namhlanje… wathetha!
5 June 2013 ukuze 0:32
umhlobo wenza yonke into xa ufikelelo ngaphezulu enye ukwenzela ukufikelela impazamo kwimo eyimpumelelo ibonisa mna ip yam ilandelwa ngu 8,53
22 June 2013 ukuze 11:12
hi Rafael, Mna ndicebisa ukuba usinike Kwaleswa izimvo. Kufuneka ukuba ukuchonga unobangela wengxaki, akukho nzima ukunceda; ukubona ukuba FileZilla sele LOG apho ungakwazi ukukhangela iingxaki kunokwenzeka ebhalwe. Thatha ujongo kwi comment I wenza “Taylor Lopes 8 uMatshi 2011 e 9:33”. Bona kwakhona umlingane omaziyo waba ingxaki waza wenza ukuba basebenze nje ngokukhetha “Sebenzisa ezi zilandelayo IP em setings imo UMSI”. ekugcineni, basebenza ekhaya ngoko kuphela uzame i ngaphandle (internet). Kuyo nayiphi na imeko, ufunde oko lukutshoyo, It has amacebiso ngokwaneleyo. ithamsanqa!
23 June 2013 ukuze 0:08
umhlobo osenyongweni wenza yonke into ukufikelela ilungelo hd zam enye intanethi ngakumbi nje ifayile ngumxhasi zilla yi bonisa ibhola ngakumbi xa ekubeni ukuhlola yazisa kum le Imposiso elandelayo.
Imposiso ivula lo ncwadi eneenkcukacha kwi FTP server. qinisekisa ukuba unemvume ukunikezela i eneenkcukacha.
227 kokungena mode asonge 192,168,0,2,8,53
24 June 2013 ukuze 17:56
EMTO walwa lo mfo yonke q ababekwababelihlolile intanethi yakho ngaphandle kakhulu ezintle wachaza ndikwazi ukwenza kakuhle ngaphandle iimpazamo, apha phezu bomnyango eMTO elula umzila yam / modem wifi eh iyunithi enye ye esaphila sele wenza yonke into sele ngaphambi zilayishwe iinketho iingcango njengoko play3, Xbox, phakathi kwezinye eh q yonke kuthetha oluzenzekelayo njengam eMTO umsebenzi lwangaphandle ngaphandle abathengi bam indlu imithetho ngamanye amaxesha kufuneka ukuba le q ifayile HD yam ngoku nje 8mg intanethi real ngoku vlw 400$ Internet kunye ngokweentloko akukho mfuneko yokuba athathe kakhulu ngakumbi kwi zangaphandle hd eMTO ebulela siyavuyisana ukwabelana olu lwazi kunye nathi!
Loo zantle ebomini bakho ngenxa yokuba abantu parabens kude engento
5 uSeptemba 2013 ukuze 12:56
5 uSeptemba 2013 ukuze 13:53
Ndenza zonke izicwangciso, kodwa usoloko uhlangabezana le mpazamo: uqhagamshelo behluleke “ECONNREFUSED – Umdibaniso walile server”.
15 June 2015 ukuze 21:29
Carlos Alexandre wathi:
tutorial wakho uye amagama ngaphantsi zobugcisa abaninzi intanethi, into lula naphambi konke ukufunda, kwaye yayinguye lowo unqophisileyo ukufumana ukuba impumelelo!
Andiyi amazwana, kodwa kwakufanele ukuze.
28 June 2015 ukuze 19:02
Ukuqulunqwa kwe-DDNS ukuqhuba ngemodem + umzila Khohlwa i-No-IP kunye nee-DynDNS! Yenza i-router yakho isebenze kwimodi yebhuloho kwaye ulungiselele ii-DDNS nge-DNS-O-Matic. Problema Aviso: Le Post inezinto ezithile zobugcisa ezingayi kugutyungelwa.. Yonke le nto yaqala xa ndifumana kumsebenzisi u-Hi ....
Akuvumelekanga © 2022 taylorlopes.com ukususela Okt 2012, 3.470.022 ukufikelela